DAAWO VIDEO:Ehelka Naciima Qorane oo fariin Muhim Diray calaada Darada Hargeysa. – Marqaanmedia24.com
DAAWO VIDEO:Ehelka Naciima Qorane oo fariin Muhim Diray calaada Darada Hargeysa.
April 15, 2018 maqal iyo muuqaal, wararka 16
ehelka Naciima Qorane iyo qareenada u Doodayey Ayaa Cadaalad daro ku Tilmaamay Xukunka Hargeysa ee Naciima Qorane Sadexda Sano lagu xukumay.
Xildhibaan Faderalka oo Doortay.
Akhbaar sugan oo aan ka helay khubaro “think tank” ah ayaa saadaalinaya in uu geyiga Woqooyi Galbeed sanado kooban ka dib ay bulshada Itoobiyaanku, gaar ahaan Oromadu, la wareegi doonto oo uu geyigu Itoobiya si dabiici ah uga tirsanaan doono. Waa haddii aanay Soomaalida geyiga lihi aanay tallaabo adag ka qaadin sinji guurka geyigaasi ka hirgalaya. Hadda ka dib waxaad tahay “Oromolander” kol haddii Soomaalidiidnimadaadii iyo Soomaaliya ka cararkaagii aad isugu sinji guurisay oo aad geyiga Itoobiya guddoonsiisay.
Horta waa markaad horse inaan dhulka kugu jiiday waxaan Ku gartay saad magacayga ubedeshay.
Marka labaad hadeer baabaa OROMADII Somaliland Ku noolayd madaxweyne iyaga ka dhaashay usoo baxay oo Ethiopia Ku fadhiistay kursiga ugu sareeya, waaan kuwii TV yada afsoomaliga Ku hadla laga daawaday iyagoo leh dalkaygii Hooyo ee Ethiopia baan Ku laabanaynaa, haday wax qabsan karaana bore bay uqabsan lahaayeen.
Midaaad leedahay HAWIYE & ISAAQ baaa naga wngsn oo qadiyadooda ayay Ku miditsanyahiin waaan kugu raacsanahay oo waaa kuwaas kala qaatay daaroodka koonfureed & daaroodka waqooyi ee hartiga, hawyana wuxu haystaa oo Hoos tiisa keenay daaroodka koonfureed, Isaaqna daaroodka waqooyi, waaaa qorshaan udagnay daaroodka oo USC ( HAG ) & SNM ( ISAAQ ) markaa maxaaa meeel idiin yaalaaa sxb , xorayn aaad is xoraysaan maaheee jidkale maydiin furanyahay?!
Anigu jabkiinaa wuxuunnaan ka akhristaa website ka warsangali ee allsanaag.com kkk shalay baan arkaayay isagoo leh. SNM ( ISAAQ ) & USC ( HAG ) oo ku guulaystay inay Budhlayn ka saaraan imaaraadka.
Waar dee websitekan aad noo xigsato dabacayuun baa leh oo beenta iyo barabagaankiina dhicisoobay ayaad ku bakhti nooleysiisaan kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. Waa website bakhti-nooleys ah ee aad magaca sharafta leh suuq uga dhigateen. Inta maanka ka curyaaman iyo kuwa uu marqaanku madax maray ayaa websitekan mar labaad ku soo laabta oo xaqiiq ah. Habar Yoonista reer Sanaag ayaa ba ku maadsata runtii. Code 99 kiina iskaga xadreeya.
Midda ku saabsan in aad xagga qaddiyadda siyaasadeed nagaga fiican tihiin waa xaqiiqo jirta laakiin weligaa ha isku maaweelinin macnaha aad u fasiratay ee aad faanka iyo fatooshkaaga niyadda isugu dhisto. Idinkii baa lafihiini u yaabban oo ay Oromo idiin sarreysaa ee maxaad cid kale kooreysataan> kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk. Dream on!
Waleee website kaas baaan sifiican uga daalacdaa maalinba halkay idinla marayso xaajadu, faashilkiina ayuu waliba si wcn ugasheekeeyaa.
Bal waxaad maanta iga shaafisaan “jabka” iyo “burburka” adyun Hartiga iyo guud ahaan Daaroodka la jaceshihiin maxaad ka dheefi lahaydeen? Sidee bay idinka farxad iyo faa’iido idiin ku ahaan lahayd?
Intaas uun ma iga qancin kartaan waayo annagu ummad xataa gaalo ah ee meel daggan ee aan wax dhibaato ah inoo geysanin abidkayo “jab” iyo “ba'” u ma aynaan rajeynayn oo damiirkeenu na ma siiyeen, macadalla dad Islaamnimo, Soomaalinimo, derisnimo iyo ehelnimo ba nala wadaaga.
Ma jab baaa kuu hadhay sxb mar hadii dhulkii & caasimadihii aad lahaydeen hadaad harti tahiin dhamaanba ka babanaayo calankayga tawxiidka leh.
Garoowena dusheeda fadhiyo oo ah casimadii budhlayn, jabka kaa maqan eed iwaydiinaysaa maxuu yahay?!
Garowe noogu kaalayaa aan adigana kaagaa yeedhsiiyay.
3 magaalo bu hartigu kulahaa waqooyi ama Somaliland, Sadexdiiba calanka tawxiidka leh ee sadex midab ka ah ah baa ka dul babanayaa.
Jabka kuu hadhay eed markaa aniga I waydinaysaa maxuu yahay sxb?!
Bal kawaran sadexdaa magaalo oo IDOOR lahaan lahaa oo calanka Blue ga ahina ka taagnaa lahaa?!
Wasiirka biyaha Somaliland & wafti balaadhan oo uu hoogaaminaayo oo soo gaadhay TUKARAQ maanta, isagoo halkaas dhagax dhigay mashaaric badan oo kamid ah SALDHIGA POLICE & MID MILITARY ba .
Xorayntii baaa yaabtay.
Weli su’aashayda ka ma aanad jawaabin. Mid se xasuusnoow mar kasta. Tukaraq mise Garoowe mise Raas Xaafuun ama Jamaame in aad “qabsato” u ma baahnid sida dabiiciga ah sababta oo ah waa deegaamo Soomaaliyeed oo adiguna Soomaali baad tahay. Waa wada hoygaagii iyo baro aad leedahay ee aanay cid Soomaali ahi kaa xigin. Waxaa “qabsan” kara oo keli ah ajnabi shisheeye ah laakiin adigu adiga ayaaba iska leh.
Aan su’aashii hore mid kale kuugu daro ee, marka aad ku andacoonayso “waan qabsaday”, ayo ahaan baad adigu isku xisaabisay markaasi? Labadan su’aalood si waafi ah ee miyirsan ma uga jawaabi kartaa?
Su’aashii aad I waydiisay waan kaagaa jawaabay walibana si xarago leh baan jawaabtaadaa kuusiiyay, waxaan ku idhi jabka kuu hadbay een kubaday maxuu yahay marhadaan sadexdii magaalo eed waqooyi ku lahaydeen idinka oo harti ah dhamaanba calankaygu ka babanaayo maxuu yahay jabka kaleed sugaysaa sow mahaa uun inaad sidaadii dhahdo car GAROWE noogu kaalayaa!
Sifiican baad u fahantay baan u malaynyaa hadeer.
Anigu dhamaan dhulkii waqooyi gacantayda ayuu ku jiraa sxb, jabka kaleed iwaydini ama raadinayso aniga magaraanaaye goormaad sadexdaas magaalo ka raacdaynaysaan calanka Somaliland?! Su’aashi automatically adiga makugusoo noqotay!!
Adiga hal su’aal ah oodan mahadun maku waydiiyaa?!
Hadaan ku idhaahdo Laascaanod goormaa xoraynaysaan ood calanka ISAAQAA ka dajinaysaan 11 sanay maraysaaye?!
Bal sanad qabso sxb.
Saaxiib cajalad margatay sideeda uun baad hadal qudh ah mar kasta ku hadaaqaysaa ee ka jawaab labada su’aalood ee aan ku weyddiiyay maandhe. Mise waad ku margatay oo jawaab baad u wayday? kkkkkkkkkkkkk Waan garanayay in aad daamanka meermeerin doonto.
Sida la wada garanayo, Isaaqu Garoowe, Laaska, Qardho, Boosaaso, Gaalkacayo, Buuhoodle, Kismaanyo, Xamar, Badhan, Laasqoray, Jigjiga, Isiolo iyo Gaarissa inta ba way dhooban yihiin oo Soomaalidoodaas iyo eheladoodaas ayay iskaga dhex jiraan ee, ma Isaaq kale ee aynaan aqoon baa soo daahiray oo cirka ka soo dhacay?
Dee haday joogaan ilayn danahoogay ujoogaano daaroodkuba waakuwa hargeysa iyo berbera iyo burco iyo gabilay iyo djiboutiba joogee maxaad kansheegaysaa soiwniga aniguba CANADA jooga oo dantayda u joogaa.
Su’aasha an ku waydiiyay sideedaa uga jawaab sxb aan waliba kuugu celiyee.
Goormaad laaskii calanka idoor kadajinaysaan 11 sanay maraysaayee?!
Kolba geed madaxa hala dhicine aaayaar uga jawaab!!
Hadba sidii digaagad kurkii laga jaray dhan isku qaad,
LIDHI MAYSID LAASCAANODEEY.